Beylikdüzü Belediyesi – RayHaber | raillynews
BM04 IETT ayaa hadda ka bilowday Kavaklı
Khadka BM04 IETT wuxuu hada ka bilaabmayaa Kavaklı ilaa Safarka: Joogtada ugu horeysa ee khadka BM04 ee ka tagaya İhlas Marmara Guri ilaa Avc Metrolar Metrobüs waxaa loo kaxaystay Kavaklı xaafada Canary Street. Beylikdüzü Maareeyaha Waaxda Duulista Gaadiidka ee Waaxda Maamulka Sayniska [More ...]
Qadka baska ee BM4 ayaa la geeyay Avcılar Metrobus
Khadaka BM4 ayaa loo dheereeyay istaagida Avcılar Metrobus stop: İhlas Marmara Guryaha [More ...]
Qaboojinta cusbooneysiinta ee joogsiga Metrobus
Muruqyada istaroogga ee istaroogga ah ee 'Metrobus Stop': Degmada Beylikdüzü, isniinta iyo subaxnimada subaxba muwaadiniinta lehna soo dhoweyn wanaagsan. Kooxaha degmada, joogsiyada metrobus, boorsooyinka muwaaddiniinta, deeqaha iyo cabitaanka miraha ayaa la siiyaa. [More ...]
Xoogaa yaab leh oo istaagay Metrobus!
Arin layaab leh oo ku istaagtay istaatka! Degmada Beylikdüzü, metrobus waxay istaagtaa guryaheedii iyo ganacsiyada waxay siinayeen maraq muwaadiniinta sugaya. Muwaadiniinta ayaa aad ugu qancay qaybinta maraq. Degmada Beylikdüzü, faa iido waxtar leh [More ...]
Jidka 'Metrobus Stop' waxaa loo adeegsaday maraq muwaadin muwaadin Beylikdüzü Dawlada Hoose, metrobus waxay joojineysaa sugida maraq ee loo adeegay muwaaddiniinta. Muwaadiniintu aad bay ugu qanceen qaybinta maraq. Dawlada hoose ee Beylikdüzü, wixii ka dambeeya baraf xoog leh, dhammaan xarumaha [More ...]